January 2018 – AutoMyanmar
အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Ford F-150!
Ford F-series ရဲ့ ၂၀၁၈ model ဖြစ်တဲ့ F-150 ဟာဆိုရင် အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ford ဟာသူ့ရဲ့ F-series ကို အကြမ်းခံနိုင်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှု အစရှိတဲ့အရည်သွေးကောင်းတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့် အခုလို စစ်တပ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ USAA (United Services Automobile Association) ရဲ့ Auto analyst ဖြစ်သူ Jimmy Spears ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ Ford F-150 ဟာအရင်နှစ်ကလည်း အမေရိကန်စစ်တပ်က ဝယ်ယူမှုအများဆုံးကားတစ်စီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကိုသိရမှာပါ။ “We are proud and humbled that those who protect and defend our country choose Ford F-Series,” said Todd […]
အသုံးအဆောင်တွေကို Nissan’s self-parking နည်းပညာအတိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ ProPILOT Park Ryokan!
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ProPILOT Park Ryokan အမည်ရှိ ရိုးရာတည်းခိုခန်း လေးကတော့ Nissan ရဲ့ Self-parking နည်းပညာကို ဖိနပ်၊ စားပွဲ၊ ကူရှင် အစရှိတဲ့ ဆိုင်ရဲ့ အသုံးဆောင်တွေထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ProPILOT Park Ryokan ဟာတော့ Nissan ကဖွင့်လှစ်တဲ့တည်းခိုခန်းလေးပါ။ Nissan အနေနဲ့ Self-parking (ProPILOT Park) ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ မှာပါ။ All-new Nissan LEAF တွေမှာစတင်ထည့်သွင်းပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးကအရာဝတ္ထုတွေကိုအလိုလိုရှောင်ပေးပြီး ပါကင်နဲ့အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် အစအဆုံးပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် နည်းပညာတစ်ခုပါ။ ProPILOT Park ကတော့ Nissan Leaf model အသစ်မှာလည်း ပါဝင်လာဉီးမှာပါ။ ProPILOT Park tech ပါဝင်တဲ့ကားတွေဟာခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလို ပါကင်ထိုးသွားသလို ProPILOT Park tech […]
What Car ? ဆိုတာကတော့ Europe မှာရှိတဲ့ Car-buying brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ဟာတော့ Leaf နဲ့ ၂၀၁၈ What Car ? မှာ “Best Electric Car” အမည်နဲ့ဆုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ What Car ? မှာ Nissan Leaf နဲ့ရရှိခဲ့တာ ဒါပထမဉီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၁ တုန်းကလည်း “Ultra Low Carbon” နဲ့ဆုရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Leaf model ချင်းကတော့ မတူဘူးပေါ့ဗျာ။ Nissan ဟာ ၂၀၁၁ ကစလို့ Leaf နဲ့ပဲ ဆုပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ Nissan Leaf ဟာဆု ကိုရာဇဝင်နဲ့သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ Steve Huntingford, […]
Adam Lansing ဟာ ဓာတ်ငွေ့ကားကို လျှပ်စစ်သီးသန့်ကားတစ်စီးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့် The Electric Kid လိုတင်စားခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောင်းလဲဖန်တီးလိုက်တဲ့ကားကတော့ အင်ဂျင်မဲ့ Toyota 1980 Celica ကို ၁၃၀ mile range ရှိပြီး 94 lithium ion ဘက်ထရီ အသုံးပြုထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကားဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Lancing ၁၂ နှစ်အရွယ်ကစတာပါ။ Lancing ဟာ ၁၂ အရွယ်ထဲကတည်းက ဓာတ်ငွေ့ကားကနေ လျှပ်စစ်ကား ကိုပြောင်းလဲချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုကြားမိတဲ့ Lancing သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေဟာတော့ Lancing ကို အင်ဂျင်မဲ့ Toyota Celica ၁၉၈၀ ကို ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Lansing got the idea to convertagas […]